Shiinaha 3Z Cultivator Loogu Talo Galay Warshada Cows-ga Soonka iyo alaab-qeybiyeyaasha. RY AGRI
Mashiinnada wax beerista badanaa waxaa loola jeedaa mashiinnada loo isticmaalo jarista dhirta, kala-bixidda ciidda, jabinta iyo adkeynta carrada dusha sare, beero iyo fuulidda inta lagu jiro xilliga koriinka ee dalagyada, ama in lagu dhammaystiro howlaha kor ku xusan isla markaana lagu sameeyo bacriminta isla waqtigaas, oo ay ku jiraan beeraha dhammaystiran, iskudarsatada iskudarsan iyo khaas gaar ah. Beerista dhammaystiran waxaa loo isticmaalaa diyaarinta sariirta abuurka oo ay ku jiraan diyaarinta ka hor abuurka, maaraynta dhulka baadiyaha ah, isku darka Bacriminta kiimikada iyo kiimikooyinka. Hawlaha wax-soo-saarka ee dalagyada waxaa ka mid ah furitaanka ciidda, jabinta carrada dusha sare, khafiifinta geedaha, jaridda dhirta, gogosha dusha sare iyo beerista dhogorta. Qaar ka mid ah beeraleyda gaarka ah ayaa loo adeegsadaa hawlgallada gaarka ah ee beero, beero shaah lagu beero iyo beero caag ah.
3Z beeraha beeraha beeraha beeraha wuxuu kuhaboon yahay beerista galleyda, cudbiga, soybean, sonkorta iwm. Waxay sameyn kartaa beerista, jeexitaanka, fuulitaanka, furfurnaanta qoto dheer, iwm. Beer-wade dhaqameedka wuxuu jebin karaa ciidda adag, carrada dabacsan, wuxuuna dhulka ku hayn karaa dhulka hoostiisa. biyaha ciidda, oo nadiifi jawska dalagga. Mashiinkaan wax beerayaa waa qaab dhismeed macquul ah. Waa ammaan, waara, iyo waxtar sare.
Waqtigan xaadirka ah, taxanaha taxanaha ah ee '3Z' wuxuu leeyahay oo keliya howlaha jarista dhirta iyo furitaanka ciidda. Haddii macaamiisha ay u baahan yihiin howlo kale sida taranka iyo beero wareejinta, waanu u habeyn karnaa. Waxaan ubaahanahay inaan iswaafajino moodooyin kaladuwan sida ku cad kaladuwanaanta faras cagaf ee macaamilka. Haddii cagafta ay aad u sarreyso, way fududahay in mashiinka la waxyeeleeyo. Haddii cagaf cagafku yar yahay mishiinkuna aad u weyn yahay, way adkaan doontaa in lagu shaqeeyo geedi socodka hawlgalka, wayna adag tahay in la gaadho saamaynta hawlgalka. Sidaa darteed, aad ayey muhiim u tahay in lala xiriiro jawiga isticmaalka mashiinnada iyo aaladaha marxaladda hore.
Kala fogaanshaha Ridge
1.Waa beer la fuulay, beeraha beerta leh cagaf-cagaf 18-80hp ah.
Qoto dheerida shaqada ee beeraleydan beeraha ah waa la hagaajin karaa.
3.Baarka caleemaha ayaa noqon kara mid la xulan karo baahidaada.
Hore: Harrow Disc culus oo loogu talagalay Beeraha 1BQX
Xiga: Beeraha Hirgelinta Disc Beerka Loo Iibinayo